Faah Faahin: Dagaallo Xooggan Oo Ka Dhacay Degmada Buula Burde.
Sunday June 18, 2017 - 10:45:31 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay markale dib uga qarxeen magaalo ay gacabta ku hayaan ciidamada shisheeyaha Jabuuti.
Dagaal culus oo saacado badan qaatay ayaa xalay saqdii dhexe illaa saaka waaberigii ka dhacay degmada Buula Burde ee bartamaha Soomaaliya, dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay dhowr jiho ka weerareen saldhigyada ciidamada Jabuuti.
Dad ku sugan gobolka Hiiraan ayaa soo sheegay in jugta madaafiicda laysku adeegsanayay dagaalka laga maqlayay deegaanno ka fog magaala Buula Burde.
Dagaalka oo ahaa mid culus ayay ciidamada Al Shabaab ugu suurtagashay in ay gudaha ugalaan xaafado katirsan magaalada halkaas oo ay kula dagaallameen ciidamada Jabuuti iyo maleeshiyaadka DF-ka sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Khasaara dhimasho iyo dhaawac ah ayaa lasoo sheegayaa in ciidanka Jabuuti uu kasoo gaaray dagaalkii xalay, maanta barqadii ayay ciidamada AMISOM hawada ka saareen dhammaan isgaarsiinta degmada Buula Burde waxaana garoonka macmalka degmadaasi soo caga dhigtay laba diyaaradood oo calaamadda UN ay ku buufsantahay.